နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: သွားရစ်လေ ... သွားနှင့်လေဦးတော့
- ငယ်ငယ်တုန်းက စာတစ်စောင် ဖတ်ဖူးတယ်။
အဖွားက အဖိုးကို ရေးပေးခဲ့ဖူးတာတဲ့။
၁၉၂၃ ကတည်းက ဆိုပါတော့...။
အဖိုးက ဒီစာကို မြတ်နိုးလွန်းလို့ ဆိုပြီး သူ့ကုတ်အင်္ကျီထဲက အိတ်ထောင်ထဲမှာ အသေအချာလေး သိမ်းထားတာ...။
သွားလေရာ ကိုယ်နဲ့ မကွာ ဆောင် ဆောင် သွားတတ်တယ်...။
အဖိုးကတော့ ပြောတယ်...။ သားလေး နားမလည်နိုင်ပေမယ့် အဖိုးပြောပြမယ်တဲ့...။
“အဲဒီတုန်းက မြေရှင်ကြေးရှင်ခေတ်ဆိုတော့ မင်းတို့အဖွားရဲ့ အဖေက အဖိုးကို သဘော မတူနိုင်ဘူးဆိုပြီး တူးတူးခါးခါး ဖြစ်တယ်”တဲ့...။ (အချစ်စစ် ဆိုတာ ဘယ် ဖြောင့်ဖြူးမလဲနော့...။)
- ဒါပေမဲ့လဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ခင်စုံမက်ကြလေတော့ သူတို့နဲ့ ဝေးရာ တစ်နေရာကို နှစ်ဦးသဘောတူ ခိုးပြေးဖို့ ရူးရူးမိုက်မိုက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
အတူ ထွက်ပြေးပြီးတော့ တွေ့တဲ့ တရားရုံးတစ်ခုမှာ လက်မှတ်ထိုး လက်ထပ်ကြမယ်လေ။
အဲလို နှစ်ဦးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ချိန်းထားတဲ့ နေ့ကို ရောက်လာတာပေါ့။
လေကလဲသာ ရာသီဥတုက ကောင်းနေတယ်။ အိမ်ကလဲ မရိပ်မိဘူး။
အဖိုးလဲ ချိန်းထားတဲ့ နေရာကို စုထားတဲ့ လုံလောက်တဲ့ ငွေစလေး ယူပြီး ထွက်လာတာပေါ့။
ချိန်းထားတဲ့ နေရာမျာ တော်တော်ကြာကြာ စောင့်မိသေးတယ်။
အချိန်အတော်ကြာလင့်လို့ မင်းအဖွား ရောက်မလာလေတော့ အဖိုးခမျာ ရူးမတတ် ခံစားရတယ်ကွယ်...။ အဖိုးတစ်ယောက်တည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ထွက်သွားမလို့ လုပ်သေးတယ်။ မင်းအဖွားက လုပ်ရက်လေခြင်းပေါ့ကွယ်။
ဒါပေမဲ့ အဖိုးတို့နှစ်ယောက်က အလွန်ချစ်ကြလေတော့ ဒါ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး မသင်္ကာလို့ ဘေးဘီကို ကြည့်မိမှ ချိန်းထားတဲ့ သစ်ပင်နားက ပင်စည်မှာ သံမှိုနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ စာတစ်စောင် တွေ့မိပါရောလား။
ထင်တဲ့ အတိုင်း မင်းအဖွားဆီကပါပဲကွယ်...။ စာထဲမှာ ရေးထားတာကတော့
- ချစ်ရေ.. အဲဒီကို ချစ်အရင် ရောက်နှင့်နေရင် ကိုယ့်ကို လက်မလျှော့ပါနဲ့နော်။
လုပ်စရာတွေက မပြီးပြတ်သေးလို့ အခွင့်မသာသေးဘူး။ အလုပ်တွေ မပြီးသေးဘူး..။ ပြီးတာနဲ့ ဆက်ဆက်ပြန်တွေ့ကြမယ်...။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ကြာမယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး ချစ်ရယ်...တဲ့ ။
ချစ်နဲ့ကိုယ် အခုရော၊ နောင်တစ်ချိန်ရော ပြန်တွေ့တဲ့အထိ အသက်ထက်ဆုံး ချစ်နေမယ်ဆိုတာ ယုံပါ... ဂတိပေးပါတယ်...။
- ကျွန်တော် အဖွားစာကို ဖတ်နေချိန်တုန်းက အဖွားက သိပ်မမာတော့ဘူး...။ အဲဒါ အဖိုးနဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ အဖွားအတွက် ပြန်လည် သက်သာနေကောင်းလာပါစေရယ်လို့ ဆုတောင်းဖို့ အသွားမှာ ဘုရားကျောင်းထဲ မ၀င်ခင် အဖိုးက ဒီစာကို ပေးဖတ်ခဲ့တာလေ...။
ကျွန်တော် ဒီအသက်အရွယ်အထိ (ဆယ့်ငါးနှစ်အထိ) အဖိုးငိုတယ်ဆိုတာ မမြင်ဖူးဘူး...။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အဖိုးလေ... မျက်ရည်တွေ မျက်လံးအိမ်န့ အပြည့် ၀ိုင်းနေတာ မြင်ရတယ်။ မျက်ရည်တွေ တွေတွေ ကျရင်းနဲ့ ပါးစပ်ကလဲ ဗလုံးပထွေး ပြောနေတာ ကျွန်တော် မြင်ရ ကြားရခဲ့တယ်...။ အဖွားက အဖိုးကို ရေးပေးခဲ့ စာထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်းပဲ...။
လုပ်စရာတွေက မပြီးပြတ်သေးလို့ အခွင့်မသာသေးဘူး။ အလုပ်တွေ မပြီးသေးဘူး..။ ပြီးတာနဲ့ ဆက်ဆက်ပြန်တွေ့ကြမယ်...။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ကြာမယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး ချစ်ရယ်...။
တစ်ခါက နာမည် ကျော်ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ Collin Raye ဆိုတဲ့ ကန်းထရိး အဆိုတော်က ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး ပါ။ "Love Me" ပါတဲ့...။
ဒီသီချင်းလေးကို ကြိုက်မိလို့ ဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်။
နားလည် သဘောပေါက်သလောက် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ရတာ ထောင့်နေ၊ ထောက်နေရင် ကျွန်တော် ပြန်တာ လိုနေသေးတယ်လို့ ဖြည်တွေး တွေးပေးလိုက်ပါ...။
မြန်မာတွေ ပြန်ဆိုထားတာ ရှိတယ်။
ဇော်ပိုင်က စံပါယ်ဖြူ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်ဆိုထားတာ။
အခုကတော့ အော်ရီဂျင်နယ် ဗားရှင်းကို တင်ထားပေးတယ်...။
သီချင်းနာမည်က Love Me
သီဆိုသူက Collin Raye
သီချင်းလေးက ဆုံးသွားတဲ့ အဖွားကို တမ်းတတဲ့ အဖိုးကို မြင်တဲ့ မြေးလေး နေရာကနေ ခံစားပေးတဲ့ အကြောင်းပါ။
သီချင်းစာသားလေးတွေပါ လိုက်ဖတ်ပြီး ခံစားကြည့်ပါ။ စိတ်ထဲနှစ်ပြီး နားထောင်ပါ။ လွမ်းစရာ ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်...။ ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့်လေးပါ။
Love me (Collin Raye)I readanote my Grandma wrote back in 1923
ထပ်ဖြည့်။ ။ အမ်ပီသရီးကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ကလစ်လိုက်ပါဗျာ...။ (ဗွီဒီယို ကြည့်မရဘူးဆိုတဲ့ နန်းညီအတွက်)
အသံချည်းပဲ နားဆင်ချင်တယ်ဆို အောက်က ကလစ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပေါ့။ စာသားလေးပါ ပါတယ်။
Credit To : kissable84
ဗွီဒီယိုနဲ့ စာသားပါ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီယူထုကို နှိပ်လိုက်ပါ...။
Credit to : DCMusicFan14
စာကြွင်း။ ။ ညက ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ပါ။ နေ့ခင်းမှာ တင်နိုင်အောင် စကယ်ကျူး လုပ်ထားပါတယ်။ ၃း၀၀ နာရီမှာ အော်တိုတက်နိုင်အောင် စမ်းထားတာပါ။ တက်မတက် အကြောင်းပြန်ပါ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:17 PM
khet myint myint February 28, 2009 at 3:23 PM
ပိုစ့်တက်လာပါတယ်။ ဗွေဆော်ဦး မန့်သွားပါတယ်။ သီချင်းလေးကို သဘောကျသွားပါတယ်။
KLNG February 28, 2009 at 3:38 PM
:P February 28, 2009 at 5:19 PM
ကိုဘ အဘွားက အဘိုးကို ချစ် လို့ခေါ်တယ်မှတ်နေတာ....
** ခုတလော အစားအသောက် မီးလိုမတောက်တော့ပဲ
အတည်ပေါက်တွေ လုပ်နေပါလား... ဘာများကြံနေပါလိမ့်
khin oo may February 28, 2009 at 6:52 PM
လုပ်ပြန်ပြီ. သူ့အဖိုးအောက်မေ့လို့။ သူများအဖိုးကို သူက လိုက်ခံစားနေပြန်ပြီ။ နှလုံးသားတွေ နူးညံ့နေပုံဘဲ။
စကားမစပ် အဖိုးနဲ့ အဖွားက ရသွားကြသလားဟင်။ ရသွားတဲ့ အခန်းမပါလို့။
အဖွားရဲ့ ရည်းစားစာ က ခေတ်ဆန်နေတယ် ရွေဥဒေါင်းခတ် က လေ နဲ့ရေးသင့်ပါတယ်။
အဖွားကလဲ ခပ်ထုံထုံဘဲနော်။ လူတော့မလာဘဲ စာဘဲလာထားသွားတယ်။ အရေးကြီးတာ ကျန်ခဲ့တယ်။
သီချင်းကတော့ဟိုနေ့တည်းက ksg ကိုပေးထားကတည်းက တွေ့ပြိးပါပြီ။ နားထောင်တယ် လို့ညာမပြောပါ။ တနေ့နေ့မှာတော့ထောင်မည် ဟု ရဲရဲကြီး ဂတြိ့ပူပါ၏
ခေါင်းစဉ်ကလေးကတော့လွမ်းစရာလေး .အခံရှိရင်မျက်ရည်ကျသွားအောင် ချူနိုင်ပါ၏၏၏
khin oo may February 28, 2009 at 7:11 PM
စာကြွင်း။ ။ ညက ရေးထားတဲ့ ကွန်မက်ပါ။ ညနေးမှာ တင်နိုင်အောင် စကယ်ကျူး လုပ်ထားပါတယ်။ ၆း၅၂ နာရီမှာ အော်တိုတက်နိုင်အောင် စမ်းထားတာပါ။ တက်မတက် အကြောင်းပြန်ပါ...။
khin oo may February 28, 2009 at 7:12 PM
၁၈: ၅၂ နာရီ. (မွှားသွားလို့)
shin February 28, 2009 at 11:55 PM
First, read the the story in Burmese version and feel that how come your grandparent story is so similar with this song lyrics. ha ha....
Yes, it'savery nice song. I love it....
Ko Boyz March 1, 2009 at 12:00 AM
- သီချင်းလေးကို သဘောကျတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျား...။
- ဆင်ကြံကြံနေတယ်လို့ သံသယ မဖြစ်ဘူးလားဟင်..။ :P
- အဖိုးနဲ့ အဖွားရသွားလို့ ကောင်လေးက အဖွားလို့ ခေါ်တာကို မဖတ်မိဘူးလားဟင်။ မရရင် အဖိုးရဲ့ အရင်က ချစ်သူလို့ ရေးမှာပေါ့။ စုံထောက် ၀တ္ထုတွေ မဖတ်ဘူးထင်တယ်။ (နားမလည်သူတွေ များနေသေးပါလားလို့ ဒီနေရာမှာ ကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းချသွားတယ်...။)
- ကိုကေကို ပေးတဲ့ သီချင်းက ဒီသီချင်းဟုတ်လို့လား အန်တီဂွိရာ...။ (သေချာဂဏစွာ စစ်ဆေးရမည်။ အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလဲ ယခုကဲ့သို့ လူယုံအောင် ညာပြောတတ်သည်။)
- ပို့စ်များကို ကြိုတင်၍ မိမိတင်ချင်သော အချိန်တွင် တက်နိုင်အောင် ကြိုတင် စီစဉ်နိုင်သော်လဲ မတင်သေးသော ပို့စ်များအတွက် ကော်မန့်များကို ကြိုတင် တင်နိုင်သည် ဆိုခြင်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိပါ...။ ဂူဂယ်မှ ဤဆားဗစ် ကို ပေးသည်ဟုလဲ မကြားရသေးရာ... အန်တီဂိ ၏ ဆင်လုံးများသာ ဖြစ်သည်ဟု တွေးမိ....။
Ko Boyz March 1, 2009 at 12:02 AM
ရှင်းရေ - သီချင်းလေးက အလွမ်းဓါတ်ခံရှိသူများအတွက် နင့်ကနဲ ခံစားစေလို့ ဝေငှပေးတာပါ။ အကြိုက်လေးတွေ တူတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်...။
ksanchaung March 1, 2009 at 12:58 AM
အိမ်း။ တို့လည်း တစ်နေ့တော့ အဖိုးအဖွားတွေ ဖြစ်ရဦးမှာဆိုတော့ ... (အန်တီဂွိလေသံနဲ့) “တရားကျသွား”
♥ Acacia ♥ March 1, 2009 at 1:00 AM
သီချင်းကိုလည်းသဘောကျတယ် ရေးထားတာကိုလည်းသဘောကျတယ် commentတွေကိုလည်းသဘောကျတယ် reply ပြန်တာကိုလည်းသဘောကျတယ် ခြုံပြောရရင်တော့ နည်းနည်းအိုက်တယ် တရုတ်လိုအိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ မြန်မာလို အိုက်တာပါ ဟိဟိ တနည်းဆိုရသော် တော်တော်ပူပါ၏ :P စမ်းတဲ့အတိုင်းပို့စ်က တိတိကျကျတက်လားဟင် ၃နာရီသာဆိုတယ် ၂:၁၇ ဆို.. တညိုးကြီးပဲ... :P
Ko Boyz March 1, 2009 at 2:38 AM
Acacia အသင်၏ ကွန်ပြူတာ နာရီသော်လည်းကောင်း၊ အသင့်နာရီသော်လည်းကောင်း စံတော်ချိန်နှင့် လွဲနေသည် ဖြစ်ရမည်။ ရေဒီယိုနှင့် တိုက်ကြည့်ပါလေ။ (ခေါင်းနှင့် ရေဒီယိုနှင့် တိုက်ရမည်ဟု မဆိုလို။ ရေဒီယိုမှ စံတော်ချိန်နှင့် ကွန်ပြူတာ နာရီကို အချိန်တိုက်ညှိစေခြင်း ဖြစ်သည်။)
သီချင်းကို သဘောကျသည်ဟု သိရသည့်အတွက် ဝေငှရကျိုးနပ် ၀မ်းသာပါသည်။
Phyo Maw March 1, 2009 at 3:23 AM
ဟာဗျာ ko boyz!
ညားသွားတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ နောက်ထက်ထပ်ပြီးခိုးပြေးတာလား
အတင်းလပ်ထပ်ယူတာလားနဲ့ တစစ တွေးလာလိုက်တာ
တကယ် တကယ် တကယ်ပါပဲ
ဟောင်းပေမယ့် မပြောင်းသေးတဲ့ အချစ်တွေများကြားရမလားမှတ်တာ...
မသိဘူး... ဟာဗျာ လို့ပဲထပ်ပြောလိုက်တော့မယ်
( မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ဆုံးသွားသံဖြင့် လေပူမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး ဒါကိုရေးလိုက်သည်။ )
Ko Boyz March 1, 2009 at 3:27 AM
နောက်မှ ဘယ်လိုညားတယ်ဆိုတာ လံကြုတ်ဇာတ်လမ်းရေးဖို့တောင် အကြံရလာပြိ...။
khin oo may March 1, 2009 at 9:04 AM
(နားမလည်သူတွေ များနေသေးပါလားလို့ ဒီနေရာမှာ ကြိတ်ပြီး သက်ပြင်းချသွားတယ်...။)
နားလည်ပါတယ။် ဒါပေမဲ့ကြံဖန် အပစ်ရှာကြည့်တယ်။
ကိုကေကို ပေးတဲ့သီချင်းသေချာပါတယ်. တစ်နေရာမှ save လုပ်ထားတယ်။ သေချာပြန်စစ်ကြည့်ပြီးမှ ပြောတာ။ မပိုင်ရင် မပြောဘူး။
ကွန်မက်ကို ကြိုတက်အောင် လုပ်တာ ကတော့ပေါက်ထုံများလာမလား လို့ကြိုပြီး အင်ထုထားတာာပါ.။ ထင်တဲ အတိုင်းဘဲ သူမလာပါဘူးလေ။
ကြည် March 1, 2009 at 11:15 AM
ကိုးရီးယားကားဆိုလည်း အပြေးအလွားလာ .....သီချင်းဆိုလည်း အလွတ်မပေးခဲ့ပါဘူး..သေချာနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်..ကြိုက်ပါတယ်.။ ဘယ်လိုတင်လို့ ..ဘယ်အချိန်တက်လည်း မသိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ များများတင်ပါလို့။......
အများထဲက သာမန်လူဆိုတော့ သူများတွေထင်သလိုပဲ ဘွိုက်ရဲ့ အဖိုးနဲ့ အဖွား ဇတ်လမ်းလေးလို့ ပထမ ထင်မိပါတယ်..အဆုံးထိဖတ်လိုက်တော့မှ "အော်...ဂလိုကိုး " (တစ်ယောက်ထဲ ခိုးဖတ်နေသော်လည်း ဘေးကို မလုံမလဲ ကြည့်ရင်းပြော)
PAUK March 1, 2009 at 11:22 AM
ဟီးး လာတယ်မမ ဘတ်တ်..မန့်တွေ မဖတ်မိဘူး..
PAUK March 1, 2009 at 11:23 AM
အရေးကြီးတာက အခုမှ သီချင်းနားထောင်မလို့..
ကိုယ့်ရဲ့50 cent လေးပိတ်ပီးသကာလ...
Ko Boyz March 1, 2009 at 3:29 PM
အန်တီဂိ ပေါက် တစ်ယောက်လာရှာပါတယ်။ ခက်တာက သူက အန်တီဂိလို ကော်မန့်တွေ မဖတ်လေတော့ အန်တီဂိ ဆင်တဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ မသက်ဆင်းမိပါ။ အန်တီဂိသာ ကိုယ်ဆင်တဲ့ ထောင်ချောက် ကိုယ်ပြန်မနင်းမိအောင် သတိထားပါလေ...။ အဟေဟေဟေ့...။
ကြည် တင်ထားတာတွေ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် လာဖတ်သူတွေကို တစ်ခုခု ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ နေ့တိုင်းနီးပါး ပုံမှန်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပေါက် ပေါက်ရေ ... သီချင်းလေး နားထောင်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ ဝေမျှ ပေးပါဦး...။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
JuneOne March 1, 2009 at 3:31 PM
Ko Boyz March 1, 2009 at 3:32 PM
မခိုင်သီချင်း လာဆိုပြနေသလားလို့ သံသယ ဖြစ်နေတယ်...။
PAUK March 1, 2009 at 5:41 PM
Ko Boyz March 1, 2009 at 6:19 PM
အချစ်က မုန်းဖို့ ကောင်းတယ်တဲ့...။
မင်းလူများ တွေ့ရင် ယူသုံးမလား မသိဘူး...။
NangNyi March 1, 2009 at 6:58 PM
ထုံးစံအတိုင်း မန့်သွားမယ်.. ဘာမှ ကြည့်မရဘူး.. :P
khin oo may March 1, 2009 at 7:01 PM
ဒီတစ်ခါတော့ပေါက်ထုံတို့ က ဗိုလ်စွဲသွားပြီ။
စွဲ ဆို ဒါ က mm တို့ ပေါက်တီု့ရဲ့ခွင်ကိုး။
boyz က edit လုပ်လိုက်တော့
အချစ်က မုန်းဖို့ ကောင်းတယ်တဲ...။
အချစ်က မုန်းဖို့ ကောင်းတယ်...။
ပြောင်မြောက်လိုက်ကြတာ။ ဘလော့ဂါကြီးတွေမို့လို့ထင်တယ်။ စာရေးတာတွေလည်းကောင်းလိုက်တာ။
khin oo may March 1, 2009 at 7:03 PM
နန်းညီလည်း ဘာမကြည့်မရတာ လာလာကြည့်နေရတယ။် ခလေးကို မနိပ်စက်ပါနဲ့။
Ko Boyz March 1, 2009 at 7:06 PM
နန်းညီရေ... ယူထုက ဗွီဒီယို ကြည့်မရဘူးဆိုလို့ အမ်ပီသရီးဖိုင် ပြန်တင်ထားပေးတယ်။ မီဒိယာ ဖိုင်းယားမှာ အရင်တစ်ခါ တင်ထားတာ အသင့်ရှိနေလို့ တစ်ခါတည်း တင်လိုက်တယ်။ ပို့စ်ထဲက လင့်ခ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အောက်က လင့်ခ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် အမ်ပီသရီး သီချင်းကို ဒါရိုက် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်သွားနိုင်တယ်နော်...။ ကျော်ခွပြီး လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးကွယ်...။
အန်တီဂိရေ။ ရင်ဘတ်ထဲက လာတဲ့ ခံစားချက်တွေက ထိတယ်နော်...။ ပေါက်တို့က ရေးတတ်တာ။ ကျွန်တော်မျိုးတော့ အဲလို မရေးတတ်ပါဗျာ...။
Ko Boyz March 1, 2009 at 7:08 PM
အန်တီဂိရေ... နောက်ဆို အားလုံး Access လုပ်နိုင်အောင် တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပါမယ်...။
သူ့ အဖွားကသူ့ အဘိုးကို ချစ်လိုက်တာလို့ 
အားကျပြီးဖတ်လိုက်တာ ပညာရှင်တွေများတက်လဲတက်နိုင်ပါ့ 
Ko Boyz March 1, 2009 at 11:20 PM
ပညာရှင်တွေ မတက်ဘူး ထင်တယ်...။ တတ်ပဲ တတ်နိုင်တာ ထင်တယ်။ အဟက်...။ နောက်တာပါ။
လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ပျံပါတယ်နော့။
သီချင်းလေးကို နားထောင်ခံစားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဝေဖန်ချက်လေးများ မပေးတော့ဘူးလား...။ :)
ကလူသစ် March 2, 2009 at 12:05 AM
အကုန်ဖတ်သွားပေမဲ့ သီချင်းနားမထောင်သွားဘူး။ နှလုံးသားက အရမ်းနုနယ်တယ်။ သိတ်ခံစားနေလို့မရဘူး။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ရင် ဒွတ်ခ။ မြန်မာလိုဖတ်ကထဲက တခုခုလွဲနေပြီထင်သား။ အဖိုးနဲ့အဖွားသာဆိုတယ်။ ပေါင်းရတယ်လို့လဲ မပါဘူး။ စာမှာကထဲက ဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာတောင် မပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားကို ထပ်နှပ်စက်ခြင်းမပြုပါရန်
Ko Boyz March 2, 2009 at 1:01 AM
ကလူသစ် - သီချင်းနားထောင်စေချင်လို့ စာတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်နေတာကို သူက တစ်လွဲ...။ နောက်တစ်ခါ ပြန်လာနားထောင်ပါ။ နားဝင်ချိုပါတယ်...။
မီယာ March 2, 2009 at 2:34 AM
သီချင်းနားထောင်သွားတယ်... ဇော်ပိုင်ဆိုတာ နားထောင်ဖူးတယ်... သီချင်းထဲက ပုံတွေ ဆိုပြီး ပို့စ်ရေးထားတယ်.. မအားတာနဲ့ လက်စ မသပ်ရသေးဘူး.. ချက်ချင်း အထာမပေါက်သူတွေ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်လို့ ပျော်သွားသည်...
khin oo may March 2, 2009 at 6:19 AM
အားလုံးထဲ မှာ မီယာ အလိမာဆုံ့းဘဲ သီချင်းကို သူ့ဘာသာ လာပြီးနာေ။ထာင် တယ်။ သွားလဲ မခေါ်ရဘူး.။ နားလည်ထောင်တယ်။ good
ksanchaung March 2, 2009 at 11:56 AM
အန်တီဂွိ မှန်ပါတယ်။ ကိုကေကို ပေးဖူးတဲ့ သီချင်းပါ။
mae March 29, 2009 at 6:24 AM
It's one of my favourite songs. Just noticed that you'd doneacover on it too. You play well.. but i wish you didn't sing it :P
Ko Boyz March 29, 2009 at 1:17 PM
I juz sang it likeayear ago.
I played the karaoke version and sing along it.
Mae, Sorry to spoil ur hope.
ကြိုက်လွန်းတော့လဲ မနေနိုင်ပဲ ၀င်ဖျက်မိတယ်ကွယ်... အဲ.. အဲ ၀င်ဆိုမိတယ်ကွယ်...။ ဟိဟိ